Boqoradda Ingriiska oo billad Gudoonsiisey Cumar Faarax Dhoolwaa oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed (Waaysi) – Radio Daljir
Boqoradda Ingriiska oo billad Gudoonsiisey Cumar Faarax Dhoolwaa oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed (Waaysi)
Juunyo 18, 2013 3:37 b 0
Australia, June 18, ?Boqoradda Ingriiska ayaa bilad qaali ah gudoonsiisey Cumar Faarax Dhoolwaa oo ah aqoon yahan Soomaaliyeed oo kusugan wadanka Australia.
Cumar Faarax Dhoolwaa ayaa biladani ku mutaytay caawinta iyo gacan siinta dadka soogalootiga ah ee Australia, gaar ahaana kuwa ka yimaada wadamada Geeska Afrika oo uu ka caawiyo raadinta shaqooyinka iyo sharciyadda.
Radio Daljir ayaa la xiriiray Cumar Dhoolwaa isagoo sheegay in biladani ay tahay mid farxad u ah dhamaan umada Soomaaliyeed taasoo uu sheegay in aduunka ay tusi karto in Soomaalidu yihiin dad waxqabankara.
“Anigu waxaan la shaqeeyaa dad badan oo ka yimid Geeska Afirika, sida Sudan, Ehiopia, Somalia, Masar, Jabuuti, Eretria iyo Wadamo kale, oo aan kala shaqeeyo arimaha shaqooyinka iyo usoo dhamaynta wixii Dawlada kaga xidhan marka bilada waxaan ku mutaystay inaan dadkaasi caawiyo,” ayuu yiri Cumar Faarax Dhoolwaa.
Wuxuu sheegay in biladani ay tahay biladda labaad ee laga bixiyo wadanka Australia taasoo ay bixiso boqoradda Ingriiska oo maamusha dalka Australia oo ka kamid ah boqortooyadda UK.
“Biladani waxa weeye biladda labaad ee wadanka laga bixiyo waxaa jirta bilad lasiiyo dadka loo arko qofkii wadanka wax u qabto, boqoradda bixisa waxay usoo gudbisaa ninka wadankan wakiilka uga ah isagaa usii dira qofkaasi iyadoo xaflad gaar ah lagu bixiyo,” ayuu hadalkiisa ku daray Md Dhoolwaa.
Cumar Dhoolwaa ayaa wadanka Australia ku sugnaa mudo 26 sano ah isagoo sanadii 1988 dii qaxxootinimo ku galay wadankaasi waxaana biladani uu ku mutaystay caawinaad badan oo uu u fidiyo dad ka soo galootiga ah ee ka yimaada Geeska Afrika ee gala wadanka Australia.
Sheeko Gaaban: qaybtii 4’aad ee sheekadii Ismadhaanto (Dhegayso)
Baahin: Isniin, June 17 2013, Caawa Iyo Daljir, Weriye Khadar Cawl Ismaaciil ~ Daljir ~ Buuhoodle